Booliiska Rwanda oo toogasho ku dilay saddex nin oo looga shaki qabo xagjiriin - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldBooliiska Rwanda oo toogasho ku dilay saddex nin oo looga shaki qabo xagjiriin
August 20, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada booliiska dalka Rwanda.
Kigali-(Puntland Mirror) Saddex nin oo looga shaki qabo in ay ahaayeen kuwa shaqaalaysiiya jihaadiyiinta ayaa booliiska dalka Rwanda ku toogteen koonfurta-galbeed ee Rwanda kadib markii ay ka dhaga-adaygeen in la xiro, sida ay booliiska ku sheegeen bayaan.
Sida ay ku warantay wakaalada wararka AFP booliiska ayaa sheegay in nimanka la dilay ay dagaalameen ayna isku dayeen in ay baxsadaan markii ciidamada booliiska ay howlgal ku qaadeen guriga ay joogeen.
Booliiska ayaa sheegay saddex nin oo kale oo laga shaki qabo oo mid kamid ah uu dhaawac yahay ay soo xireen.
Baaritaanka hordhaca ah ayaa muujinaya in nimankaas ay ku howlanaayeen olole ujeedkiisu ahaa qoritaan kooxo jihaadiyiin ah, sida lagu sheegay bayaan booliiska kasoo baxay.
Booliiska ayaa guriga ay joogeen nimankaas waxay kasoo heleen waxyaabo xagjirayn ah oo ay kamidyihiin cajilado CD ah iyo buugaag.
Rwanda oo ah dal kuyaala qaarada Afrika oo lagu xasuusto xasuuqii ugu xumaa caalamka dalka uu ka dhacay sanadkii 90-kii, ayaa bulshada Muslimiinta yihiin kuwa ugu yar oo kunool dalkaas. Rwanda ayaan marna arag weeraro argagixiso oo dalkeeda ka dhaca.
July 17, 2016 Afrika oo yeelatay baasaboor cusub
Haayada SSF oo gawaarida maxaabiista la saaro ugu deeqday degmooyin kuyaala Puntland
Madaxweynaha Puntland oo kormeer ku sameeyay ciidamada Daraawiishta Puntland ee ku sugan xerada 54-aad ee Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Arbaco ah kormeer ku sameeyay ciidamada Daraawiishta Puntland ee ku sugan xerada 54-aad ee duleedka magaalada Garoowe. Saraakiil ciidan oo hore oo uu kamidyahay [...]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Al-Shabab militants has attacked a military base of Somali army in southwest of the capital Mogadishu on Monday. Somali military officer who spoke to Reuters said “Heavy exchange of gunfire continued for hours,” [...]